UTroy Patterson ugqoke iinqanawa ezininzi, nangona wayezithiyile loo nto. Ungumgxekayo wencwadi ngeNP, umgxeka weTV kwiSlate.com kunye nomgxeki wefilimu kumagazini we-Spin. Kwakhona wabhalela ezinye iimpapasho eziquka i-New York Times Book Review, i-Men's Vogue, i-Wired, ne-Entertainment Weekly.
U-Patterson, obiza ikhaya laseBrooklyn, ungumlobi okhohlakeleyo okhohlakeleyo kunye nobungummangaliso owenza izivakalisi ezifana nalezi malunga noJon noKate Gosselin, isibini esichukumisayo esikhungweni "Jon & Kate Plus 8":
"U-harpy oneminyaka engama-34 ubudala kunye neengqungquthela ezibalaseleyo ezinjengezitampu zeebhayisikili ezithwele i-haircutcut ye-haircut ye-haircut." Unomntu oneminyaka engama-32 ubudala onobungozi obunokuthi u-skate-punk and brun forelocks Iindaba ezimbi, kwaye, ekuboniseni, bobabini banzima ukwenza isahlulo seminyaka yabo. "
Okanye funda uthabathe "I-X Factor:"
Abantu bathanda ukuthetha ngendlela inyaniso yeTV ikhangisa ngayo ababonisi. Oku kwabhalwa ngobusuku obudlulileyo xa umcuphi wee-auditing Seattle wehla ibhulukhwe zakhe, ugqugquzela uPaul Abdul ukuba ahlume ngokucokisekileyo. Ukuba simmisele eceleni, i-rejectees ekhunjulwayo yayisigqeba somyeni kunye nomfazi weDan noVitita. Baye balwa kwi-key "nge-Unchained Melody," bembethe iingubo ze-transfixingly tacky ukulinganisela njengevilivini, kwaye babenobunzima ngokubhaliweyo ngendlela. Ukuba le nto yayiyi-tryout yokutshintshela i-film ye-David Lynch yokutya kwendawo yokutya, babeyifumana ngokuqinisekileyo ukubuyisela kwakhona.
Nantsi i-Q & A nePatterson.
Q: Ndixelele ngokufutshane ngemvelaphi yakho:
A: Njengengane kunye nentombazana e-Richmond, eVirginia, ndandingumfundi omkhulu-Twain, Poe, Hemingway, Vonnegut, uSalinger, uJudy Blume, iincwadi zentetho, iingxelo zamaphandle kwidolophu, iibhokisi ze-Cheerios, nantoni na. Ndamkeleka kumaphephancwadi ngendlela kaTom Wolfe kunye noTywala.
Ndaya ekholeji ePrinceton, apho ndaziphakamisa khona kwisiNgesi saseTritski kwaye ndatshintsha i-campus nganye veki. Emva kokugqiba, ndahlala eSanta Cruz, eCalifornia, ixesha elincinane, ndisebenza kwivenkile yekhofi kunye ne-freelancing kwi-alt-weekly local. Lezo ziyimifanekiso ezazisetyenziswa xa ndifaka izicelo zemagazini eNew York. Ndasebenza kwi-Weekly Entertainment iminyaka engama-7, apho ndaqala khona njengomncedisi kwaye kamva ngaba ngumongameli wencwadi kunye nombhali wabasebenzi, kwaye ndashiya i-EW ngomhla wokuzalwa wam wama-30 ukuya kwi-freelance kwaye ndingazikhohlisi ngokubhalwa kweengcamango. Ngo-2006, ndaya eSlate, apho ndikho kwisivumelwano, kwaye emva koko ndithatha i-gigs ehlaziya iifilimu ze-Spin kunye neencwadi ze-NPR.
Umbuzo: Ufunde phi ukubhala?
A: Ndicinga ukuba bonke abalobi bazifundisa ngokwenza izinto, ukuziqhelanisa, ukuziqhelanisa . Kunceda ukuba ngabaqeqeshi abalungileyo endleleni (yam iquka abafundisi bee-nursery-school to Toni Morrison ) kunye nokuzingela phantsi ngezikhokelo eziqhelekileyo (i-Strunk & White, uWilliam Zinsser, njl.).
Umbuzo: Nguwuphi umhla wokusebenza onjengawe?
A: Andinayo intsuku yomsebenzi. Maxa wambi ndibhala yonke imihla, ngamanye amaxesha ndibhalela imizuzu engama-90. Ngamanye amaxesha konke ukufunda nokunika ingxelo kunye nophando. Kwiintsuku ezithile ndigijime ngenyameko ndibukele ama-movie okanye ndirekhode i-podcasts okanye nitshintshe ngabahleli.
Emva koko kukho ukugcinwa kunye neendaba, ukuhlaselwa kubarhulumente, ukuphendula ukuzonda i-imeyile, nokukhangela kwi-plafil ukuzama ukuza neengcamango.
Umbuzo: Yintoni oyithandayo / ungayithandi into oyenzayo?
A: Ngamana ndingacaphuna uDorothy Parker? "Ndiyayinqanda ukubhala; ndiyakuthanda ukubhala."
Umbuzo: Ngaba kunzima ukuba yi-freelancer?
A: Uthi beteta. Yaye impumelelo, nangona ixhomekeke kumsebenzi onzima, iphinde ixhomekeke kwinqweno enqabileyo.
Umbuzo: Naliphi na icebiso lokufuna abalobi / abagxeki?
A: Ulibale; ukuya esikolweni somthetho. Kodwa ukuba unomdla omkhulu wokuba unqabile ukuba ngumlobi wezobugcisa, uzama ukufunda okuthile malunga nobubanzi obubanzi beembali kunye nenkcubeko - uShakespeare, ukukhwabanisa, iifashthi, ifilosofi, ezopolitiko, yonke into. Futhi ungakhathazeki ngokuthi "ukuphucula izwi lakho"; ukuba ufunda abadala bakho ngokukhawuleza kwaye uzama ukubhala ngokwemvelo, kuya kukhula.
Iintsuku ezintathu I-Grace Biography kunye neProfayili
Iintlobo ezahlukeneyo zemali kwizoqoqosho
Uthando lweengqungquthela zoBungqina boBungqina beNgesi
Umbuzo othe ngqo kwigrama